News Blog | Consulate-General of the Republic of the Union of Myanmar, Los Angeles, U.S.A
Posted by admin on Mar 20, 2018 in News | Comments Off on Myanmar’s Statement on recent Developments in the Korean Peninsula
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထောက်ခံကြိုဆိုကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန် (နေပြည်တော်၊ ၁၅-၃-၂၀၁၈ ရက်) မြန်မာနိုင်ငံမှ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအပေါ် ထောက်ခံကြိုဆိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အား ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ ——————————— (Unicode Version) ကိုရီးယားကြှနျးဆှယျတှငျ လကျရှိဖွဈပျေါတိုးတကျမှုမြားအပျေါ မွနျမာနိုငျငံမှ ထောကျခံကွိုဆိုကွောငျး သတငျးထုတျပွနျ (နပွေညျတျော၊ ၁၅-၃-၂၀၁၈ ရကျ) မွနျမာနိုငျငံမှ...
Posted by Consul Soe on Nov 1, 2017 in News | Comments Off on UEHRD သို့ အများပြည်သူ လှူဒါန်းနိုင်ရန် ဘဏ်စာရင်းအသစ်များ အသိပေးကြေညာခြင်း
Posted by Consul Soe on Nov 1, 2017 in News | Comments Off on Myanmar Evangelical Christian Alliance (MECA) issuesastatement
မြန်မာနိုင်ငံ ဧ၀ံဂေလိ ခရစ်ယာန် မဟာမိတ်အဖွဲ့ချုပ် (MECA)က သဘောထားထုတ်ပြန် နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၇ ARSA အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကမ္ဘာ့ဧ၀ံဂေလိ မဟာမိတ် အဖွဲ့ချုပ် (WEA) နှင့် အာရှဧ၀ံဂေလိ မဟာမိတ်အဖွဲ့ချုပ် (AEA) တို့၏ အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသော မြန်မာနိုင်ငံ ဧ၀ံဂေလိ ခရစ်ယာန် မဟာမိတ်အဖွဲ့ချုပ် (MECA) က သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ARSA အကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ...
Posted by Consul Soe on Oct 18, 2017 in News | Comments Off on Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine-UEHRD ၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာ Website လွှင့်တင်ခြင်း
၁။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်မည့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီအထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း(Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine-UEHRD) ၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာ Website ကို ၁၅-၁၀-၂၀၁၇ ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် စတင်လွှင့်တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၂။ အဆိုပါ အင်တာနက်လိပ်စာမှာ http://rakhine.unionenterprise.org ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့်...
Official designated website of e-Visa System
Posted by Consul Soe on Mar 14, 2017 in News | Comments Off on Official designated website of e-Visa System
Posted by Consul Soe on Nov 9, 2016 in Blog, News | Comments Off on Holiday Announcement
The Consulate-General of the Republic of the Union of Myanmar in Los Angeles will be closed on November 11th, 2016 (Friday) in observance of Veterans Day and on November 14th, 2016 (Monday) in observance of Full-Moon Day of Tazaungmon. The office will open again on November 15th, 2016 (Tuesday).
၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရစေရန် အသိပေးကြေညာခြင်း
Posted by Consul Soe on Nov 9, 2016 in Blog, News | Comments Off on ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရစေရန် အသိပေးကြေညာခြင်း
Posted by Thwin Htet on Jul 13, 2016 in News | Comments Off on Tender Invitation
Posted by Thwin Htet on Jul 7, 2016 in News | Comments Off on Hot Line Phone Number
ဖြေလျှော့ သက်သာ၊ ရက်(၁၀၀)မှသည်၊ ရွှေခေတ်ဆီသို့
Posted by Thwin Htet on May 27, 2016 in News | Comments Off on ဖြေလျှော့ သက်သာ၊ ရက်(၁၀၀)မှသည်၊ ရွှေခေတ်ဆီသို့